कांग्रेसका वागी उमेदवार पार्टीबाट निष्कासित, को–को परे कारबाहीमा ? (सूचीसहित) - Bidur Khabar
कांग्रेसका वागी उमेदवार पार्टीबाट निष्कासित, को–को परे कारबाहीमा ? (सूचीसहित)
विदुर खबर २०७६ असार ३ गते १२:३२
नुवाकोट असार ३, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध वागी उमेदवारी दिएका नेताहरुलाई कारबही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले तीनवटै तहको निर्वाचनमा वागी उमेदवारी दिएका नेता, तिनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले अन्य पार्टीमा गई विभिन्न तहमा उमेदवारी दिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । उनीहरुलाई कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३४ को उपधारा ४ (क) बमोजिम कारबही गरिएको अनुशासन समितिका संयोजक भीष्मराज आङदम्बेले जानकारी दिए । उनले वागी उमेदवार, प्रस्तावक तथा समर्थक र अन्य पार्टीमा गई उम्मेदवार बनेका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको पार्टीको अभिलेखबाट हटाउनसमेत निर्देशन दिएको बताए ।
यी हुन् कारबाहीमा परेका नेता–कार्यकर्ताहरु